Nahatratra ny taona 2009 e!
2009-01-01 @ 08:38 in Ankapobeny
Miarahaba antsika rehetra nahatratra ity taona vaovao 2009 ity indray. Fifaliana mandrakariva izany na taiza na taiza, na inona na inona natao hiandrasana izany taona vaovao izany. Tsy ny fahantrana na ny fahasahiranana velively sanatria no idifiana fotoam-pifaliana tahaka ny amin'izao fotoana izao. Mirary fahasalamana, fahavitrihana, fahombiazana, fifaliana, fahasambarana ho anao izay mandalo amin'ity sehatra ity ny tenako.
Ho tso-drano mandrakariva ho an'ny eto Antananarivo ihany koa anie ny orana nilatsaka halina mba hampangatsiatsiaka ihany koa ny tontolo izay naha-ana loatra teo aloha teo. Dia hanoratra lava be indray aho amin'ny manaraka fa izao fohy ihany ny hafatra atao aloha!
jentilisa, 01 janoary 2009